I-villa enhle yamatshe - ichibi elishisayo lelanga langasese.
Ibekwe emagqumeni ase-Le Marche, e-Italy, i-Casa Val d'Aso iyindlu yokulima yamatshe enhle etholakalayo ukuze iqashelwe ukuphekela ngamaholide. Indawo yokuhlala enkulu, eqokwe kahle enechibi lokubhukuda elishisayo elishisayo kanye nokubukwa okuhle ngaphesheya kwesigodi sase-Aso ngasemadolobhaneni ase-Monte Falcone, eSanta Vittoria naseMontelparo.
Imi endaweni eseceleni kodwa kungakapheli imizuzu emithathu yokushayela edolobhaneni eliseduze eliphezulu, i-villa ihlinzeka ngobumfihlo kanye nazo zonke izinsiza ongazifisa.
Indlu yasepulazini inikeza indawo ebanzi ebekwe kahle, indawo yokuziphakela abantu abangafika kwabayishumi nanye kuma-master suite amabili, ikamelo lokulala elilodwa namakamelo amathathu. Kukhona nombhede osofa ababili.
Indawo yokuhlala ibuye izuzwe yithala elisanda kwakhiwa (2018) lasekhishini elinwetshiwe eline-pergola, ifenisha yangaphandle, i-BBQ, ifriji lesibili kanye nohhavini we-pizza obaswa ngokhuni (uphethiloli unikeziwe). Umzila oholela ethafeni lasekhishini, unqamule izingadi zezihlahla eziqhakazayo kanye nezindawo zokuphumula ezinogwadule obheke echibini elikhulu langasese elishisayo elinelanga elinendawo eyengeziwe. Lokhu kuzungezwe izinhlangothi ezintathu udonga lwamatshe lwesici ukunikeza indawo ekahle yokushiswa yilanga nokuphumula elangeni.
Amathafa nezingadi eziseduze zibuye zipheleliswe uhlelo lokukhanyisa lwangaphandle oluthambile oluthi uma luhlanganiswa nohhavini we-pizza kanye nezindawo eziseduze ze-BBQ zokulungiselela luhlinzekele ukudla okuhle kwangaphandle kwakusihlwa.
Njengoba ugu lwe-Adriatic luya eMpumalanga, kanye neSibillini National Park eNtshonalanga, i-Le Marche inikeza umhambi onomdlandla omningi umsebenzi. Ngaphandle kwalokho, i-farmhouse inikeza indawo yokucasha ekhululekile kulabo abafuna ukubaleka kukho konke.
Itholakala eningizimu ye-Le Marche esifundeni sase-Ascoli Piceno, indlu yasepulazini inikeza indawo enhle
isisekelo sokuhlola nokujabulela i-Le Marche.
Idolobhana eliseduze legquma leForce linikeza izitolo ezinkulu kanye nebha ephumelelayo kanye nokudla okuhle kakhulu kungatholakala kuyo yonke indawo.
Uyohlangatshezwana nawe lapho ufika (noma ngokushesha ngemva kwalokho ngokuhlelwa) nguMphathi wethu wendawo oyojabulela ukukhombisa konke lokho indlu engakuhlinzeka ngakho futhi ngesikhathi esifanayo ikunikeze ulwazi lwasendaweni oluwusizo.